Vaayrasii Koronaa amalaf haala jijjiirrachuu – Mutation – Awash Times
Vaayrasii Koronaa amalaf haala jijjiirrachuu – Mutation
March 26, 2020 Malka Wabe Uncategorized Leave a comment
Seelin uumama hundaa yeroo gara yerotti amalaf haala jijjiirata (mutation). Keessattuu vaayrasiin yeroo walhoru amala jijjiirachuudhan beekama. ‘(In biology, a mutation is an alteration in the nucleotide sequence of the genome of an organism, virus, or extrachromosomal DNA)‘
Vaayrasii Koronaa amalaf haala jijjiirachuu hormaata isaa qorattoonni saayinsii uumamaa qorataa jiru. Akka marsaaretii LiveScience ibsutti qorannaa gaggeeffameen hamma ammaa vaayrasiin koronaa kuni amalaf haala jijjiirrachuu agarsiisa. Haata’u malee hamma sodaatamuu miti jedhu qorattoonni. Akka qorattoonni kaahanitti amalli inni jijjiirratu akka lama. Tokko baay’ee hammaataa kan ta’u yoo ta’u inni lammeesson immoo laafadha. Yeroo hedduu hammaataa yoo ta’e Vaayrasii gaafa duraa san irra kan nama miidhuf mala jijjiirrataa kan dhufu yoo ta’e.
Qorannaa hamma ammaa ta’een garuu vaayrasiin koronaa kuni amala jijjiirataa kan deemu ta’us hamma sodaatame hammaataa hinta’u jedhu qorattoonni.
Vaayrasiin gaafa amala jijjiirataa deemu talaalin isaaf qophaahu fayyaduu diduu qofa osoo hintaane qorichis isa balleessuu dida.
Hamma ammaa vaayrasii koronatiif qorichi kan hinargamin yoo ta’u dhaabbileen hedduun talaallii hojjechuuf ifaajaa jiru. Kanaaf immoo Vaayrasiin kuni amalaf haala ofii jijjiirrachuu laalchisee qorannaa cimaa gochaa jiru.
Previous Post: Oromoonni Awash Bishoollatti hidhaman maal jedhu?
Next Post: Maddi Vaayrasii bineeyyii bosonaarraa